Ujabulele ukubuya kweye-PSL owe-Cape Town City – Journalismiziko
Home›Sport›Ujabulele ukubuya kweye-PSL owe-Cape Town City
Usishayele ihlombe isinqumo sokubuyiswa kwemidlalo yePremier Soccer League (PSL) usihlalo weqembu IeCape Town City uJohn Comitis. Lemidlalo ibisamisiwe ngenxa yokubhebhetheka kwesifo seCovid-19.Usihlalo we PSL u-Irvin Khoza umemezele ukuthi imidlalo yokuqedela iligi ka 2019/20 izoqala mhla ziyisishiyagalombili kuNcwaba, kanye neyokuqedela umqhudelwano wendebe yeNedbank.
UComitis ukujabulele ukubuya kwemidlalo ye-PSL njengoba enezinhlelo zokuthi iqembu lakhe lingene ku-Top 8 ukuze lidlale umqhudelwano wendebe ye-MTN 8. Uthe lesi sinqumo sihle kakhulu njengoba wonke amaqembu elangazelela ukuqedela imidlalo yawo. Nabalandeli bayakulangazelela ukwazi ukuthi ngobani abazonqoba isicoco se-Absa. “Ngicabanga ukuthi sonke sikujabulele ukubuya kwemidlalo noma izoqhubeka ngaphansi kwemigomo ebekiwe,” kusho uComitis.
Iqembu lakhe i-Cape Town City lisalelwe yimidlalo eyisikhombisa kanti lilele endaweni yeshumi ku-Log. Lokho kusho ukuthi bazodinga amaphuzu amane ukuze bangene ku-Top 8 njengesifiso sika Comitis.
“Ukubekwa kosuku lokuqala kwemidlalo kuyinto enhle nezosiza amaqembu ukuthi azilungiselele akwazi nokufeza izinhloso zawo ngemidlalo esele,” kuqhuba uComitis. Uphinde wabalula ukuthi ukuqedelwa kwemidlalo kuzosiza amaqembu asethubeni lokudlala kwi-PSL athole ithuba, kuphinde kucacise ngokuthi obani abazo dliwa izembe.
“Ngijabule ngokuthi i-PSL kanye nethimba lonke bathathe isinqumo esiphusile sokubuyisa imidlalo. Sikulungele ukubuya kwemidlalo ngoba neqembu lami selizilungiselele ngokwanele ukubhekana nemidlalo esele. Sibe side isikhathi silindile, siyabonga ngethuba elihle lokuqedela imidlalo,” kusho uComitis.